नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : लेखेरै राखे हुन्छ आफैले खानेको खाडलमा प्रचन्ड सहित का बाहुन नेताहरु नै सबै भन्दा पहिले आफै पर्ने छन !!!
लेखेरै राखे हुन्छ आफैले खानेको खाडलमा प्रचन्ड सहित का बाहुन नेताहरु नै सबै भन्दा पहिले आफै पर्ने छन !!!
- Sabi Pathak
" बाहुन क्षेत्री काटिन्छ, तातो रगत चाटिन्छ"
"बाहुनलाइ काशी , क्षेत्री लाइ फासी"
जनजातीहरुको यस्ता नाराहरु हिजो आज देशका सबै शहर र गाउ हरुमा व्यापक रुप मा चर्किन थालेको छ ! आज जनजातिलाई उचालेर सडकमा ल्याउने पनि बाहुन क्षेत्री नै हुन्, प्रचन्ड सहितका यी बाहुन नेताहरु आफुले खनेको खाल्डोमा आफै पर्ने भए !
'पुष्पकमल दाहाल ब्राम्हण उर्फ प्रचण्डसंग हाम्रो ठूलो बिमति छ हामी उनलाई यी नौ वटा प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छौ , नेता हुन भने जवाफ दिनेछन देश भँडुवा हुन भने हाम्रो भन्नु केही छैन । १) जातीय राज्य नेपालका कति प्रतिशत जनताको माग हो | २) बिश्वका कुन देशमा जातीयताले सफल राष्ट्र निर्माण गरेको छ ? ३) दश बाह्र जातिलाई तपाई नेपाल बाड्नु हुन्छ भने बहुसंख्यक नेपालीलाई कता धपाउनु हुन्छ ? ४) के केही जातीय राज्य ...बाड्दैमा... तपाईलाई आजीवन सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ ? ५) तपाईले जातीयताको पक्षपोषण गर्दा कम्युनिष्टहरूको बर्गसंघर्ष कुन रद्दीको टोकरीमा फाल्नु भयो ? ६) कम्युनिष्टहरू मान्छेलाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति मान्छन , तपाईचांही कस्तो खाले कम्युनिष्ट हो मान्छेहरूलाई कित्ताकित्तामा बाँडेर कम्जोर बनाउने ? ७) के तपाईले जातीयताको रक्तरंजित खेलमा तपाईंको आफ्नो राजनैतिक भबिश्य सुरक्षित देख्नु भएको छ ? ८) के तपाईंले जातीयताको अस्त्रव्दारा बहुलबाद र लोकतन्त्र मास्न खोज्नु भएकै हो त ? ९) नेपाललाई लामो गृहयुद्धमा फसाउदा भारतले , चीनले वा अमेरिकाले ? कसले तपाईंलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छ त्यो गोपनीयता हामी निमुखा जनतालाई बताउन मिल्दैन' '? **कृपया यो पोस्ट सक्दो सेयर गरि नेताहरु माझ पुराउने कोसिस गरौ.......नेपाललाई बचाउने काम गरौ....** - Ram Lal Bhattarai
सब वाहियात !!!!!
- Mahendra Bista
जनताको अपमान गरेर म्याद थपीथपी बनाउने संबिधान,
आफ्नो फैसलाको रक्षा गर्न नसक्ने अदालत,
अडानमा अडिन नसक्ने नेता,
अनि, जे पनि सहिदिने हामी जनता !!!!!!
Posted by www.Nepalmother.com at 10:57 PM